डा. खातेको ट्रेल​र​FilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
डा. खातेको ट्रेल​र​
बाल श्रम विरुद्धको दिवसको अवसर पार्दै बालश्रम विरुद्धको आवाज प्रस्तुत गरिएको फिल्म ‘डा. खाते’को ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । राजधानीमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक ट्रेलरमा बालश्रम विरुद्धको आवाजका साथै सडक बालबालिका र घरेलु श्रमिक बाल हिंसा विरुद्धको आवाज उठान गरिएको छ ।
रवि अर्याल निर्देशित फिल्ममा रोशनी केसीको लगानी छ । फिल्ममा मुख्य भूमिकामा समेत रहेकी रोशनी यसै फिल्मबाट फिल्म निर्माणमा डेब्यु गरेकी हुन् । उनले यस अघि आधा दर्जन फिल्म र केही टेलिफिल्ममा अभिनय गरिसकेकी छिन । साउन ६ गतेबाट प्रदर्शन आउने उक्त फिल्ममा समाजकै कथालाई प्रस्तुत गरेको उनले बताइन् ।
फिल्मका काष्टिङ निर्देशक डव्वु क्षत्रीले सडक बालबालिकालाई अभिनयको लागि तयार गर्न निकै कठिन भएको बताए । उनले झण्डै एकदर्जन सडक बालबालिका मध्ये अमृत परियार, सन्तोष नेपाली, सुर्य गुरुङ र सुभाषलाई लामो समयको प्रशिक्षण पश्चात अभिनयमा उर्तान सफल भएको जनाए । डव्वुका अनुसार अहिले यी चारैजना विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारीमा रहेका छन् ।
चलचित्र विकास बोर्डका सदस्य तथा फिल्म वितरक नरेन्द्र महर्जनले फिल्मले उठान गरेको विषय आफुलाई मन परेकै कारण यसको वितरण जिम्मा आफ्नो कम्पनी एफडीले लिएको खुलाए ।